Uyazi Njani Iphi Iqela leGalofu eliza Kuza?
Abaqali be-FAQ: Ukufunda iiYardages zakho
Kukho amaqela amaninzi egalufa ekhwaleni lakho legalufu, kunye nobude obuhlukeneyo kunye neendlela ezihlukeneyo. Uyazi njani ukuba yiliphi iqela eliza kutshitshiswa kuyo yonke indawo yardard?
Ukwazi ukuba yiyiphi ibhola yegalufu yokubetha ukusuka kunoma yimuphi umgama ochazwe kuthiwa "ukwazi i-yardages yakho," kwaye ifundwe yilingo-kunye nephutha ngawo onke amajelo okuqala. Wonke umntu owake wadlala igalofu - evela kuwe kunye noJack Nicklaus kunye noTiger Woods - saqala ngokushaya amaqela ahlukeneyo, ekubukeni izibhengezo ezibangelwa, nokufunda ukuba bahamba kangakanani kwiinqanaba ezahlukeneyo zegalufa.
Jonga, Funda, Yenza ii-Guesses eziFundisiweyo ukuQala
Unokuqala ukulinganisa imitha yakho - kukude ulibethe iqela ngalinye - kwibala lokuqhuba . Kodwa ukuhamba kweendlela zokuqhuba umbane akusoloko kuhamba "imimandla" yangaphambili kuba iibhola ezenziwe kwiindawo zokuqhubela phambili zijoliswe ukuba zifakwe kwi-submission. Umgangatho wokushayela ibhola ibhola iyahlukahluka.
Idibeneyo: Uluhlu lweebhola njani lufanisa neebhola zegalufu eziqhelekileyo?
Uza kufuneka nje wenze uqikelelo olufundwayo xa uqala ukudlala iikholeji zegalufa, uqaphele iziphumo uze wenze utshintsho. Ngexesha elide, xa ufunda njengoko uya, uya kuba mnandi kakhulu ekunqumeni ukuba yiyiphi iqela eliza kushaya kuyo.
Ukuba ufuna ukwenza uqikelelo oluthile olungcono, olunye olusekelwe kuphando ngaphambi kokudlala, yenza oku:
Thatha iibhola zegalufu ezingama-30 ukuya kwintsimi evulekile, ipaki enkulu, okanye uluhlu lokushayela.
Hit bonke aba-30 basebenzisa igumbi legalufa elifanayo. Phuma waya apho iibhola zakho zihlala khona kwaye zilahle iifotshane zakho ezili-10 kunye neempuphu ezifutshane ezi-10.
Ngoku uhamba okanye ulinganise ama-yardages owabetha nganye yeebhola ezili-10, uze uzilinganise.
Leyo yindawo yakho yokuqala yeklabhu oyisebenzisayo. (Ukuba ukwenza oku, kufuneka uhambe ngaphandle kokuthi, qaphela ukuba ungabetha kwindlela nawuphi na umntu onokuthi ujikeleze.)
Gcinani engqondweni: Akukho mida efanelekileyo okanye engalunganga ukubetha nayiphi na iqela elinikeziweyo, kukho umgama wakho kuphela.
Khangela " Kude kangakanani Unyanzelekile ukuba Uyibulale nganye Iqela leGalofu? " Malunga noko.
Umgama Akuyena kuphela into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele kwiCandelo lokukhetha
Umgama akusoloko kusenza isigqibo sokhetho lwegalufa. Ukuba udlala emoyeni, uya kufuna enye iqela (i-3-hybrid ngokuchasene ne-4-hybrid, umzekelo) kunokuba umoya uzolile. Ngokufanayo, ukuba ulwa nomoya, uzakufuna ibhola elingaphantsi (insimbi-5 ngokuchasene ne-4-iron).
Iiklabhu ezilandelelanayo kwi-set (3-iron, 4-iron, 5-iron kunye nokunye) zenzelwe ukwenzela ukuba kubekho ithuba eliqhelekileyo lokudibanisa phakathi kwamaqela. Kwabaninzi begrafti, eli xesha liya kuba li-10 ukuya kwiiyadi (i-3-iron iya ku-10 iiyadi ngaphezu kwe-4-iron, eya kuya kwiiyadi ezili-10 ngaphezu kwe-iron-5). Kwakhona, oku kuya kutshintsha kancane kumdlali ukuya kumdlali.
Abavelisi balawula ibanga ngokubanzi ngokuhamba kwe- shaft kunye ne- loft ye-clubface. I-iron-7 iya kuba ne-shaft e mfutshane kune-4-iron (kubangelwa ngesivinini esingaphantsi kwe- clubhead ) kwaye i-iron-7 iya kuba ne-loft ngaphezulu ebusweni, eya kwenza ukuba ibhola ikhule kwaye iwele kwi-trajectory.
Ezi zizinto zonke i-golfer zifunda ngaphezu kwexesha, ngokudlala nokuziqhelanisa. Ngaphambi kokuba uyazi, uya kuba neyardages yakho phantsi pat.
Ukuchaza i-Par-3 Hole eGoli
Imigomo yebhola 101: Sekondari
Ukuchaza 'iPoa Annua' kwiiGolf
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala zaseSouth Carolina
Fumana izicwangciso zeNdlu yakho endala